Show All Most Popular NOW HOW SHEENE HONEI V BSC KMA Arty
w-1, 1st Floor, Yankin Park Housing, Sayar San Rd, Yangon, MM Yankin
SGCBKS N5 - BSC Lock It Fit Perfecting Brows Styler # N5
BSC Lock It Fit Perfecting Brows Styler မျက်ခုံးအစစ်ကဲ့သို့ သဘာဝဆန်သော မျက်ခုံးမွှေးဖန်တီးရန် ကူညီပေးသော Eyebrow pencil ဖြစ်ပါသည်။ Macadamia Ternifolia Seed Oil၊ Aloe Barbadenisis Leaf Extract နှင့် Cocos Nucifera (Coconut) Oil တို့ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထားသော‌ကြောင့်း မျက်ခုံးမွှေးကို နူးညံ့စိုပြေစေပြီး ကျန်းမာစေပါသည်။ ထို့အပြင် Creamy texture ရှိပြီး တနေကုန် ကြာရှည်ခံပြီး waterproof ဖြစ်သည့် နူးညံ့သော Eyebrow ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲရ လွယ်ကူစေရန် သဘာဝမျက်ခုံးမွေးစုတ်တံ ပါရှိသည်။ #N5 Light Brown
SYCYNYP - BSC Nook Body Lotion
နှုးညံသောအမွေးနှံသာများနှင့်အဟာရဖြစ်စေသော lotionဖြစ်သည်။Musky ရေမွေးနှံလေးဖြစ်ပြီးရနှံလေးကစွဲမက်မှု့ရှိစေသည်။လန်းဆန်းမှု့ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီးတနေကုန်ကြာမြင့်စွာမွှေးရနှံကိုပေးစွမ်းနိုင်သည်၊Multi-Vitaminတို့ပါဝင်သောကြောင့်အသားအရေးပြားအတွက်ပို၍လန်းဆန်းကြည်လင်ဝင်းပမှု့ကိုရရျိစေသည့်အပြင်အသားအရေကျမ်းမာစေပါသည်။
PKBS. KMA BB Brilliant Cake SPF 25 PA++ #C2 - 10g
ပေါင်ဒါကိတ်လေးမှCollagen ဓါတ်ကိုရရှိ​စေနိုင်​သောNano Collagen ရဲ့အာနိသင်ကြောင့် whitening ,wrinkle, moisturizing, youthful Looking, Peral Powder ပါဝင်​သော​ကြောင့် Crystal လိုကြည်လင်စေတဲ့ မိတ်ကပ် Look ရစေပြီးSPF 25PA++ ပါလို့နေ​ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။Advance Surface Modification Technology ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အရေးကြောင်းပါးစေ(Blur Skin) Waterproof ဖြစ်လို့ ချွေးစို၊ရေစိုခံစေပါတယ်?C2 (အလယ်အလတ်အသားအရောင်ရှိပြီး အဝါရောင်သမ်းသူ)
SEL1NZF - BSC Nook Musk Oil
BSC Nook Musk Oil သည် ပန်းပွင့်များနှင့် လိမ္မော် တို့မှ ပေါင်းခံထားသော YLANG YLANG၊ ROSE၊ NEROLI၊ VANILLA နှင့် WHITE MUSK တို့ အဓိက ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရနံ့ဆီ ပို့ဆောင်ပေးမည့် ရေမွှေးအဆီဖြစ်ပါသည်။ ကျက်သရေရှိသော မိန်းမပျိုကဲ့သို့ တမူထူးခြားသော နူးညံ့သော ရနံ့ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေကာ တနေ့တာလုံးလန်းဆန်းတက်ကြွစေပြီး ကြာရှည်ခံသည့်ရေမွေးအဆီဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်သော ရေမွှေးဆီဖြစ်သည့်အတွက် အနည်းငယ်စွတ်ရုံဖြင့် တနေ့တာလုံး သင်းရနံ့ ရရှိစေပါသည်။ Top Not
NYCCHN - Now How HYA whitening shower Cream
အသားအရေကို ဖြူ၀င်စေပြီး နေ့စဥ်ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်းဖြင့် အမာရွတ်များကို သက်သာပျောက်ကင်းစေပါသည်။ Vitamin B3, Hyaluron, Shea Butter, Collagen, Glycerin တို့ကိုရောစပ်ပြီး 5X formula ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် အသားအရေကို ပိုမိုတောက်ပစိုပြေစေ‌ပါသည်။ ထို့အပြင် ‌အမြုပ်ထွက် အားကောင်းပြီး ရေဓာတ်ကို အဆ ၁၀၀၀ မြင့်တင်ပေးသော‌‌ကြောင့်ရေဓာတ် ပြည့်၀ကာ ကျန်းမာသော အသားအရေကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေသော Shower Cream ဖြစ်ပါသည်။
CHGWBA. BSC glossy hair treatment - 450g
BSC Glossy Hair Treatment Wax အလွန်ခြောက်သွေ့ပြီးပျက်စီးနေသောဆံကေသာများအတွက် အာဟာရဖြည့်ဆေးဖြစ်ပါသည်။ခြောက်သွေ့ ပျက်စီးနေသောဆံကေသာ၊ကွဲအက်၊အစိုဓာတ်မရှိသော ပြသနာရှိသူတိုင်း၏ဆံသားများကိုပထမအကြိမ်အသုံးပြုရုဖြစ်သိသာထင်ရှားသောရလဒ်ကိုရရှိပါသည်။ ဆံသားကိုအာဟာရဖြစ်စေသောTsubaki Oilပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့်ဆံသားကိုတောက်ပြောင်စေပြီးအရှုပ်အထွေးများကိုလျော့ပါးစေပါသည်။ထို့အပြင်Barley Proteinပါ၀င်သည့်အတွက်ဆံသား၏ အစိုဓာတ်ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါသည်။
SEL4NZC - BSC Eau De Parfum Spray
BSC EAU De Parfum Spray သည် Powdery Musk ၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ရနံ့ကို Rose နှင့် Jasmine ၏ နူးညံ့သောရနံ့နှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက် ချိုမြိန်နူးညံ့သောရနံ့ကို ပေးစွမ်းပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော ဆွဲဆောင်မှုအပြည့်ရရှိစေမည့် Parfum Spray ဖြစ်ပါသည်။
DHFF10MLN - Honei V bsc Facial Foam
ပျားရည်မှ အာဟာရဓာတ်များကို ထုတ်ယူထားသောကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့ စိုပြေစေပါသည်။ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိအရေးအကြောင်းများကိုလည်း လျော့ကျစေပြီး ပါ၀င်မှုကြောင့် နုပျိုလန်းဆန်းစေပြီး ကြည်လင်တောက်ပသော အလှတရားကို ပိုင်ဆိုင်စေနိုင်ပါသည်။
NGZCP - Now How Facial Make Up Cotton Pad
အပူချိန် ၇၀ံ C ထဲတွင် ၆နာရီကျော်ကြာ ပေါင်းခံပြီး နူးညံ့ သန့်ရှင်းစေရန် သန့်စင်ထားသော ဖြစ်ပါသည်။ Cotton Pad ဖွာခြင်းမရှိပဲ Toner ၏ အာနိသင်ကို သိသာစေပါသည်။ ထို့အပြင် Toner , makeup remover အဖြစ်သာမက လက်သည်းဆိုးဆေးဖျက်ခြင်း ကလေးများသန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရာတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
DAHCWCM - Now How Micellar Cleansing Water
Micellar Cleansing Water ကို Cotton Pad ဖြင့် စိုသည့်အထိ တို့ပြီး မျက်နှာပေါ် သို့ ညင်သာစွာ သုတ်ပေးပါက မိတ်ကပ်နှင့် အညစ်အကြေးမျာကိုဖယ်ရှားပေးပါသည်။ Water type ဖြစ်သည့်အတွက်စေးကပ်ခြင်းမရှိပဲ ချွေးပေါက်ထဲရှိ အညစ်အကြေးများကို အလွယ်တကူ သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့အပြင် မျက်လုံးတ၀ိုက်ပါ အသုံးပြု၍ ရပြီး ရေဓာတ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သောကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပါသည်။
NCCFCG - Now How White Glow Cleansing Foam
Glycoproteins နှင့် Bio - White တို့ ပါ၀င်သောကြောင့် မျက်နှာအသားအရေကို ဖြူစင်၀င်းတောက်ပလာစေပါသည်။ Saccharide Isomerate နှင့် ပျားရည်တို့ကြောင့် မျက်နှာအသားအရေကို ချောမွေ့စေပြီး ရေဓာတ်ကို ညီညွှတ်မျှတစေပါသည်။ နေ့စဥ်သုံးစွဲပါက အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပြီး လှပလာစေနိုင်ပါသည်။
DAHCLIBG - Now How White Glow Balancing Toner
အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပဖြူစင်စေပြီး ယားယံခြင်းများကို ပျောက်ကင်းသက်သာစေပါသည်။ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော အသားအရေကိုလည်း ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေပါသည်။ အသားအရေကို စိုပြေနူးညံ့၀င်းပကာ ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေပြီး က အသားအရေ ယားယံခြင်းများကို သက်သာစေပါသည်။
DAHCCNRG - Now How White Glow Whitening Radiance Cream
အင်ကြင်းပင်မှ ရရှိသော အရင်းအမြစ်က Whitening Agent ဖြစ်ပြီး Kojic acid, Beta - Arbutin နှင့် Hydroquinone တို့ထက် ပိုမို ဖြူ၀င်း‌ကြည်လင်စေပါသည်။ Alpha - Arbutin နှင့် Rap Seed တို့သည် အသားအ‌ရေကို ဖြူ၀င်းစေသည့်အပြင် က အသားအရေကို သဘာ၀အတိုင်း ကြည်လင်တောက်ပချောမွေ့ပြီး နုပျိုစေပါသည်။
DALNHN - Now How Hyaluron +Plus Vit B3 Ampoule Shot
ပေါ့ပါးပြီး စိမ့်ဝင်မှုမြန်ကာ တိရိစ္ဆာန်အဆီပါဝင်သော Serum သည် အသားအရေခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းခြင်းအတွက် အထူးပြုပြင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းတွင် Hyaluraonic Solution 20% ကရေဓါတ်နှင့် အသားအရေစိုပြေခြင်း ၊ တင်းရင်းချော့မွေ့ခြင်း နှင့် ငယ်ရွယ်နုပျိုခြင်းကို ရရှိရန် ကူညီပေးပါသည်။ ၎င်းအပြင် Vutamin B3 5% မှအသားအရေကိုဝင်းပလာစေပြီး အမည်းစက်များကို လျော့နည်းစေကာ အသားအရောင်ကို တောက်ပလာစေပါသည်။
DAHCCCCN - Now How Cover clear cream
Now How Cover Clear Cream သည် နူးညံ့่ပြီး လိမ်းခြယ်ရလွယ်ကူပါသည်။ အရေးအကြောင်းနှင့် အမည်းစက်များကို ဖုံးအုပ်ပေးပြီး မျက်နှာအသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း ချော့မွေ့စေပါသည်။ နေလောင်ဒဏ် SPF ကို 50PA+++ အထိကာကွယ်ပေးသည့်အပြင် Limonia Acidissima Extract သနပ်ခါးနှင့် ဂျင်ဆင်းမြစ်မှ ရရှိစေသော အာဟာရများကြောင့် တနေ့တာလုံး လန်းဆန်းကာ ထပ်မံပြီး Tocopheryl Acetate ၏အစွမ်းကြောင့် စိုပြေပြီး ကျန်းမာသော အသားအရေအဖြစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
NCCFHS - Now How HYA Bright Serum Facial Foam
HYA Bright Serum Facial Foam သည် ဂျပန်နိုင်ငံမှ Amino Acid Super Micellar နည်းပညာဖြင့်အသစ်တဖန်ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်ထားသော Jelly Cleanser ဖြစ်ပြီးအသားအရေ အတွင်းပိုင်းအထိ၂ဆပိုမို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါသည်။ Vitamin C + နှင့် Antioxident ၏အထောက်အပံ့ကြောင့် အသားအရေကို ဝင်းပကျန်းမာလာစေပြီးငယ်ရွယ် နုပျိုမှုကို ခံစားရရှိစေနိုင်သော Jelly Cleanser ဖြစ်ပါသည်။
NBTGHN F1 - Now How HYA Moisture Lip Care # F1
စေးကပ်ခြင်းမရှိပဲ နှုတ်ခမ်းသားခြောက်သွေ့မှုကို သက်သာ‌လျော့ပါးစေပြီး နှုတ်ခမ်းသား ညိုခြင်းမှလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော Lip Care ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ပြင် နှုတ်ခမ်းသားကို ထိခိုက်စေသည့် Paraben ပါ၀င်ခြင်းမရှိပဲ ကျန်းမာသော ပန်းသွေးနှုတ်ခမ်းကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်နိုင်စေပါသည်။
NBTGHN P1 - Now How HYA Moisture Lip Care # P1
NBTGHN W1 - Now How HYA Moisture Lip Care # W1
NAPKAI IV - Now How I'm Aura Bright Powder SPF 30 PA+++
ခရမ်းချည်သီး မှ ရသော အဆီအနှစ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာပါ၀င်သော‌ကြောင့် အသားအရေ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ နေရောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ကာ ဖြူ၀င်းတောက်ပစေပါသည်။ ထို့ပြင် ‌အသားအရေယားယံခြင်း ဓာတ်မတည့်ခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အလွန်ပေါ့ပါးသော နူးညံ့သော အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေသော‌ကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်လေးများနှင့် အထူပင်သင့်လျော်သော Power Cake ဖြစ်ပါသည်။ IV = Ivory
NAPKAI NA - Now How I'm Aura Bright Powder SPF 30 PA+++
"ခရမ်းချည်သီး မှ ရသော အဆီအနှစ်များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာပါ၀င်သော‌ကြောင့် အသားအရေ ညစ်ညမ်းမှုနဲ့ နေရောင်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ကာ ဖြူ၀င်းတောက်ပစေပါသည်။ ထို့ပြင် ‌အသားအရေယားယံခြင်း ဓာတ်မတည့်ခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အလွန်ပေါ့ပါးသော နူးညံ့သော အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေသော‌ကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်လေးများနှင့် အထူပင်သင့်လျော်သော Power Cake ဖြစ်ပါသည်။ NA = Natural
NAPXFI CO - Now How I'M Face Palette # Coral
Vitamin E, Cranberry extract, Camellia extract တို့ပေါင်းစပ်ပါ၀င်ထားသောကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကို စိုပြေနူးညံ့စေကာ ချောမွေစေပါသည်။ ထို့အပြင် ဖြစ်သည့်အတွက် နှုတ်ခမ်းတွင်သာမက ပါးနီအဖြစ်ပါ အသုံးပြု၍ သဘာ၀ကျသော အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေသော Marshmallow Lip and cheek ဖြစ်ပါသည်။
NAPXFI PE - Now How I'M Face Palette # Petal
NBTLMI CL - Now How I'M Marsh Mellow Lip&Cheek # CL
ပါးနီ eye shadow highlighter တို့ကို သုံးစွဲရလွယ်ကူစေရန် All in one I'm Face Palette ဖြစ်ပါသည်။ အဖြစ် ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ၎င်း၏ နူးညံ့သောအရောင်အဆင်း ပေါင်းစပ်နိုင်စွမ်းမှာ သဘာ၀ ဆန်ပြီ ခေတ်မီသော အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေြပီး ကြာရှည်ခံသည့် အတွက် ဆယ်ကျော်သက်လေးများနှင့် အထူးပင်သင့်လျော်ပါသည်။ ထိုပြင် လိမ်းချယ်ရလွယ်ကူပြီး ပေါ့ပါးသော All in one Palette ဖြစ်သောကြောင့် ခရီးသွားလျှင် အလွယ်တကူ သယ်ဆောင်သွားနိုင်ပါသည်။
NBTLMI PH - Now How I'M Marsh Mellow Lip&Cheek # PH
NBTLMI RD - Now How I'M Marsh Mellow Lip&Cheek # RD
NBTLMI SK - Now How I'M Marsh Mellow Lip&Cheek # SK
NBTLMI TS - Now How I'M Marsh Mellow Lip&Cheek # TS
NGCBEI BB - Now How I'm Eyebrow Designer # Browny Brown
"ပိုမိုသေသပ်လှပသည့် မျက်ခုံးမွှေး၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရရှိစေရန် ဖန်တီးထားသော kabuki ဘရက်ရှ် ကြောင့် ပြီးပြည့်စုံသော မျက်ခုံးစတိုင်ကို ရရှိစေပါသည်။ Automatic Pencil ဖြစ်ပြီး ခဲသားပြင် ချောမွေ့သောကြောင့် ပေါ့ပါးသော အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေပါသည်။ waterproof ဖြစ်သောကြောင့် တနေကုန် တာရှည်ခံသော အလှကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။ ထို့ပြင် သုံးစွဲရ လွယ်ကူသောကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် အထူးပင်သင့်လျော်ပါသည်။"
NGCBEI CB - Now How I'm Eyebrow Designer # Chocolaty Brown
ပိုမိုသေသပ်လှပသည့် မျက်ခုံးမွှေး၏ ပုံသဏ္ဍာန်ကိုရရှိစေရန် ဖန်တီးထားသော kabuki ဘရက်ရှ် ကြောင့် ပြီးပြည့်စုံသော မျက်ခုံးစတိုင်ကို ရရှိစေပါသည်။ Automatic Pencil ဖြစ်ပြီး ခဲသားပြင် ချောမွေ့သောကြောင့် ပေါ့ပါးသော အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေပါသည်။ waterproof ဖြစ်သောကြောင့် တနေကုန် တာရှည်ခံသော အလှကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။ ထို့ပြင် သုံးစွဲရ လွယ်ကူသောကြောင့် ဆယ်ကျော်သက်များနှင့် အထူးပင်သင့်လျော်ပါသည်။
NBCUFN C2 - Now How Matte Finity3in 1 Foundation # C2
မိတ်ကပ်သားမစွဲခြင်း၊ ကွက်ခြင်း မရှိပဲ ချွေးဒဏ်၊ ရေဒဏ်ကို ၂၄ နာရီခံနိုင်ပါသည်။ Primer, Sunscreen,Moisturizer နှင့် Foundation တို့၏ ထူးခြားသည့် အာနိသင်တို့ကို ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် မျက်နှာအဆီပြန်ခြင်းကိုလည်း ၁၂ နာရီကြာအောင် ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Japan နိုင်ငံမှ ထွက်ရှိသည့် White Strawberry မှ ရရှိသော Hydrolyzed Hyaluronic Acid သည် အသားအရေကို နူးညံ့စေပြီး နေရောင်ခြည်ဒဏ်မှလည်း အထိရောက်ဆုံး ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
NBCUFN C7 - Now How Matte Finity3in 1 Foundation # C7
NBCUFN Y2 - Now How Matte Finiti3in 1 Foundation # Y2
PAPQFN C1 - Now How Final Powder # C1
မျက်နှာအသားအရေပေါ်တွင် ညီညာချောမွေ့မူကို ပေးစွမ်းနိုင်ပြီး တစ်နေ့တာလုံး ကြာရှည်ခံစေပါသည်။ အရောင် ၄ရောင်ရှိသဖြင့် မိမိအသားအရေနှင့် လိုက်ဖက်သော အရောင်ကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပေါ့ပါးနူးညံ့ခြင်းနှင့် အတူ အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပါသည်။
PAPQFN C7 - Now How Final Powder # C7
PAPQFN F6 - Now How Final Powder # F6
PAPQFN P2 - Now How Final Powder # P2
PAPQFNR C1 - Now How Final powder refill # C1
PAPQFNR C7 - Now How Final powder refill # C7
PAPQFNR F6 - Now How Final powder refill # F6
PAPQFNR P2 - Now How Final powder refill # P2
PAPKMNF C1 - Now How Moisture Cake # C1
Vitamin E နှင့် Moisturizer ပါ၀င်သည့်အပြင် အောက်ခံ ပါ၀င်သည့်အတွက် အသားအရေကို ၀င်းမွတ်စိုပြေစေပါသည်။ Marine Collagen အစွမ်းကြောင့်လည်း ရေဓာတ်ကို ထိန်းပေးထားသဖြင့် အသားအရေကို သဘာ၀အတိုင်း စိုပြေစေပါသည်။
PAPKMNF C7 - Now How Moisture Cake # C7
PAPKMNF N1 - Now How Moisture Cake # N1
PAPKMNFR C1 - Now How Moisture Cake refill # C1
PAPKMNFR C7 - Now How Moisture Cake refill # C7
PAPKMNFR N1 - Now How Moisture Cake refill # N1
PAPKON C2 - Now How Oil Free Powder SPF 25 PA++ #C2
နူးညံ့ ပေါ့ပါးခြင်း၊ သဘာ၀အတိုင်းလှပ်မူကို ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း၊ အဆီပြန်ခြင်းကို လုံး၀ထိန်းပေးပြီး မျက်နှာကို လင်းလက်တောက်ပစေခြင်း၊ အသားအရေကို ပိုမိုဖြူ၀င်း ကြည်လင်တောက်ပစေသော Whitebooster ပါ၀င်ပြီး နေလောင်ဒဏ်မှ ၂၅ ဆ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
PAPKON C3 - Now How Oil Free Powder SPF 25 PA++ #C3
PAPDFN C2 - Now How Fluffy Powder # C2
အဆီပြန်ခြင်းကို ထိန်းနိုင်ပြီး နေလောင်ဒဏ်မှ ၂၅ ဆ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ ပေါင်ဒါသား အလွန်နူးညံ့ပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့စေကာ ချွေးပေါက်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သောပါသည်။ ထို့အပြင် တနေကုန် အဆီမပြန်ပဲ မိတ်ကပ်သား ညက်ညောသောကြောင့် သဘာ၀ဆန်သော အလှကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။
PAPDFN C3 - Now How Fluffy Powder # C3
PAPDFN F6 - Now How Fluffy Powder # F6
PAPDFN P1 - Now How Fluffy Powder # P1
PBCUENF C2 - Now How Exee Color # C2
"Makeupသား အလွန်ပျော့ပျောင်းပြီး မျက်နှာပေါ်ရှိ ချွေးပေါက်များနှင့် အစက်‌အပျောက်များကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်သော Exee color ဖြစ်ပါသည်။ အသားအရေကို ချောမွေ့စေသော ပါ၀င်သည့်အောက်ခံခရ(မ်) ဖြစ်ပြီး သဘာ၀အတိုင်းလှပစေပါသည်။ "
PBCUENF C7 - Now How Exee Color # C7
PBCUENF F6 - Now How Exee Color # F6
PBCUENF N2 - Now How Exee Color # N2
PBCUENF Y2 - Now How Exee Color # Y2
PBCUENF Y3 - Now How Exee Color # Y3
PBMULNF - Now How Light Veil
နို့ရည်ပါ၀င်သော အောက်ခံခရင်(မ်) ဖြစ်ပါသည်။ ပါ၀င်သောကြောင့် အသားအ‌ရေခြောက်သွေ့ခြင်း၊ အရေးအကြောင်း ဖြစ်ခြင်းများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေကို သဘာ၀အတိုင်း လှပစိုပြည်နူးညံ့စေသော Fluffy Powder ဖြစ်ပါသည်။
PBTLLNF F3 - Now How Lip Coloring # F3
Now How Lip Coloring တွင် Moisture Vitamin E ပါ၀င်သောကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားညိုမဲ ပျက်စီးခြင်းကင်းစေပြီး နူးညံ့သော အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေပါသည်။ ထို့အပြင် အရောင်ထွက်မှန်ကန်သောကြောင့် စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော နှုတ်ခမ်းတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။
PBTLLNF N1 - Now How Lip Coloring # N1
PBTLLNF N2 - Now How Lip Coloring # N2
PBTLLNF P2 - Now How Lip Coloring # P2
PBTLLNF V2 - Now How Lip Coloring # V2
HAPKUSPF C2 - Sheene UV Powder Cake SPF 15 PA+++ # C2
နေလောင်ဒဏ်ကို ၁၅ဆ အထိ ကာကွယ်ပေးနိုင်သဖြင့် UVA နှင့် UVB ကြောင့် အသားအရေပျက်စီးညိုမည်းခြင်းမှ အထိရောက်ဆုံးကာကွယ်ပေးပြီး Vitamin E နှင့် Moisture ကြောင့် အသားအရေကို စိုပြေဖြူ၀င်း လှပစေပါသည်။ အောက်ခံမိတ်ကပ် ပါ၀င်ပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် အစို၊ အခြောက် ၂ မျိုး အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HAPKUSPF C4 - Sheene UV Powder Cake SPF 15 PA+++ # C4
HAPKUSRF C4 - Sheene UV Powder Cake SPF15 PA+++ Refill # C4
TGES - Sheene Enrich Lip Cream
ပြင်သစ်နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသော Sheene Enrich Lip Cream သည် Vitamin E နှင့် Moisture ပါ၀င်သောကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကို စိုပြေနူးညံ့စေသည့် အပြင် ကြောင့် ပိုမိုတောက်ပပြီး ကျန်းမာသော နှုတ်ိခမ်းသားတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
8852525018358-Sheene UV Powder Cake SPF15 PA+++ Refill C2
SAPKMIR C3 - BSC Bio Perfect Powder SPF 20 PA+++ (Refill) # C3
"Bio Perfect Powder SPF 20 PA+++ သည် နူးညံ့ချောမွေ့သော cake powder ဖြစ်သောကြောင့် မျက်နှာပေါ်ရှိ အဆီပိုများကို စုပ်ယူပေးပြီး သဘာဝအတိုင်း လှပစေပါသည်။ Lauroyl Lysine နှင့် OrgasolNitamin E တို့ပါ၀င်သောကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့ချောမွေ့စေပြီး အစိုဓာတ်ထိန်းပေးပါသည်။ အထူးသဖြင့် ""DNA GUARDIAN"" ကြောင့် အသားအရေကို အာဟာရဖြစ်စေပြီး Ceramide ပါ၀င်သောကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့စေသော အာနိသင်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။ #C1 - Tan skin အသုံးပြုပုံ - ရေမြှုပ်ဖြင့် လိမ်
SAPKHS C1 - Super Extra Cover High Coverage Powder SPF30 PA+++
BSC SUPER EXTRA COVER HIGH COVERAGE POWDER SPF30 PA+++ တွင် အမှုန်အမွှားများနှင့် အဆီ၊ အသားအရေမွဲခြောက်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဖြင့် ရေစိုခံနိုင်စေရန် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး အသားအရေမညီညာခြင်းများကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Pinus Pinaster bark extract နှင့် Vitamin E တို့ဖြင့် အထူးရောစပ်ထားသောကြောင့် အရေပြားအတွင်း အစိုဓာတ်နှင့် antioxidant များကို ပေးစွမ်းပြီ အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
SAPKHS C2 - Super Extra Cover High Coverage Powder SPF30 PA+++
"BSC SUPER EXTRA COVER HIGH COVERAGE POWDER SPF30 PA+++ တွင် အမှုန်အမွှားများနှင့် အဆီ၊ အသားအရေမွဲခြောက်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဖြင့် ရေစိုခံနိုင်စေရန် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး အသားအရေမညီညာခြင်းများကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Pinus Pinaster bark extract နှင့် Vitamin E တို့ဖြင့် အထူးရောစပ်ထားသောကြောင့် အရေပြားအတွင်း အစိုဓာတ်နှင့် antioxidant များကို ပေးစွမ်းပြီ အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။
SAPKHS N2 - Super Extra Cover High Coverage Powder SPF30 PA+++
"BSC SUPER EXTRA COVER HIGH COVERAGE POWDER SPF30 PA+++ တွင် အမှုန်အမွှားများနှင့် အဆီ၊ အသားအရေမွဲခြောက်ခြင်းကို တားဆီးပေးနိုင်ပြီး နောက်ဆုံးပေါ် နည်းပညာဖြင့် ရေစိုခံနိုင်စေရန် ဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်တောက်ပစေပြီး အသားအရေမညီညာခြင်းများကို ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Pinus Pinaster bark extract နှင့် Vitamin E တို့ဖြင့် အထူးရောစပ်ထားသောကြောင့် အရေပြားအတွင်း အစိုဓာတ်နှင့် antioxidant များကို ပေးစွမ်းပြီ အရွယ်မတိုင်မီ အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Oatmeal Extract သည် အ
SAPKHS Y1 - Super Extra Cover High Coverage Powder SPF30 PA+++
SAPKVS C1 - BSC C-Cover Light Powder SPF25 PA++ # C1
"BSC C-Cover Light Powder SPF25 PA++ သည် Miracle Reflecting Pear ပါ၀င်သောကြောင့် ချောမွေ့ပါးလွှာပြီး ပိုးသားကဲ့သို့ နူးညံ့သော အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေပါသည်။ Mattify Control Powder သည် အဆီပိုများကို စုပ်ယူစေပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့စေကာ Phyto-Lifting Complex သည် အသားအရေကို ချောမွေ့စေရန် ကူညီပေးသည်။ ဗီတာမင်စီသည် အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း တောက်ပစေပြီး ကျန်းမာသော အသားအရေကို ကူညီပေးသည့်အတွက် အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်းဖြူစင်တောက်ပစေပါသည်။ ထို့အပြင် ဆန်စေ့မှထုတ်လုပ်ထားသော အာဟာရများကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တား
SAPKVS C2 - BSC C-Cover Light Powder SPF25 PA++ # C2
"BSC C-Cover Light Powder SPF25 PA++ သည် Miracle Reflecting Pear ပါ၀င်သောကြောင့် ချောမွေ့ပါးလွှာပြီး ပိုးသားကဲ့သို့ နူးညံ့သော အထိအတွေ့ကို ခံစားရစေပါသည်။ Mattify Control Powder သည် အဆီပိုများကို စုပ်ယူစေပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့စေကာ Phyto-Lifting Complex သည် အသားအရေကို ချောမွေ့စေရန် ကူညီပေးသည်။ ဗီတာမင်စီသည် အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်း တောက်ပစေပြီး ကျန်းမာသော အသားအရေကို ကူညီပေးသည့်အတွက် အသားအရေကို သဘာဝအတိုင်းဖြူစင်တောက်ပစေပါသည်။ ထို့အပြင် ဆန်စေ့မှထုတ်လုပ်ထားသော အာဟာရများကြောင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို တာ
SAPKVS Y1 - BSC C-Cover Light Powder SPF25 PA++ # Y1
SAPKKS C1 - BSC Lock It Fit Fix Perfecting Powder SPF30 PA++ # C1
BSC Lock It Fit Fix Perfecting Powder SPF30 PA++ သည် Skin Fitting Technology ဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ပေါ့ပါးပြီး အဆီပြန်ခြင်းမရှိပဲ Cover Complexion System ပေါင်းစပ်ထားသည့် အတွက် မျက်နှာပေါ်ရှိ အရေးအကြောင်းလိုင်းများကို အသေးစိတ် ဖုံးကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Silica အမှုန့်လေးများနှင့် ရောစပ်ထားသောကြောင့် အသားအရည်ကို သက်တောင့်သက်သာရှိစေပြီး နူးညံ့မှုကို ခံစားရစေပါသည်။ antioxidant နှင့် အဖိုးတန်သော Marine Collagen များ၏ အစွမ်းကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်စေပြီး အရေးအကြောင်းနှင့် အမဲစက်များကိုလျော့ပါးစေပ
SAPKKS C2 - BSC Lock It Fit Fix Perfecting Powder SPF30 PA++ # C2
SAPKKS N2 - BSC Lock It Fit Fix Perfecting Powder SPF30 PA++ # N2
SGCBKS N2 - BSC Lock It Fit Perfecting Brows Styler # N2
BSC Lock It Fit Perfecting Brows Styler မျက်ခုံးအစစ်ကဲ့သို့ သဘာဝဆန်သော မျက်ခုံးမွှေးဖန်တီးရန် ကူညီပေးသော Eyebrow pencil ဖြစ်ပါသည်။ Macadamia Ternifolia Seed Oil၊ Aloe Barbadenisis Leaf Extract နှင့် Cocos Nucifera (Coconut) Oil တို့ဖြင့် ဖြည့်စွက်ထားသော‌ကြောင့်း မျက်ခုံးမွှေးကို နူးညံ့စိုပြေစေပြီး ကျန်းမာစေပါသည်။ ထို့အပြင် Creamy texture ရှိပြီး တနေကုန် ကြာရှည်ခံပြီး waterproof ဖြစ်သည့် နူးညံ့သော Eyebrow ဖြစ်ပါသည်။ သုံးစွဲရ လွယ်ကူစေရန် သဘာဝမျက်ခုံးမွေးစုတ်တံ ပါရှိသည်။ #N2 - Dark Brown
SCCNDVF2 - BSC Vital White Bright Up Day Cream SPF20 PA+++
သဘာဝမှ ရရှိထားသော အသီးများဖြင့် ပြုထားသောကြောင့် နေလောင်ခြင်းကြောင့်ာ ပျက်စီးနေသော အသားအရေများကို ပြန်လည် စိုပြေ နူးညံ့မှုကို ပေးသော နေ့လိမ်းခရင်(မ်) ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် ခြောက်သွေ့သော အသားအရေများကို သဘာဝအတိုင်း ကြည်လင်ဝင်းပစေပြီး အစိုဓာတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ဖြူစင် ဝင်းပ မှုကို ရရှိစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ မနက်ပိုင်းတွင် မျက်နှာကို သန့်စင်ပေးပြီးနောက် လိုအပ်သော (Cream )ပမာဏကို ယူ၍ နဖူး၊ နှာခေါင်း ၊ မေးစေ့ နှင့် ပါး တို့တွင် အသုံးပြု လိမ်း နိုင် ပါသည်။ အေး၍ခြောက်သွေ့သော၊ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရို
SCCNNVF2 - BSC Vital White Luminesce Night Cream
"အသားအ‌ရေကို နေလောင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးပြီး စိုပြေနူးညံ့စေကာ နုပျိုမှုကို ပေးစွမ်းနိုင်သော ညလိမ်းခရင်း(မ်) ဖြစ်ပြီး မည်းညစ်နေသော အသားအရေ၊ နေလောင်ခြင်းခံထားရသော အသားအရေများကို ကြည်လင်ဝင်းပ စိုပြေစေပြီး ကြံ့ခိုင်မှုကို အပြည့်အဝ ပြန်လည် ရရှိစေပါသည်။ ညအိပ်ယာ ဝင်ချိန်တွင် မျက်နှာကို သန့်စင်ပေးပြီးနောက် လိုအပ်သော ပမာဏကို ယူ၍ နဖူး၊ နှာခေါင်း ၊ မေးစေ့ နှင့် ပါး တို့တွင် အသုံးပြု လိမ်း နိုင် ပါသည်။ အေး၍ခြောက်သွေ့သော၊ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက်မထိ တွေ့ နိုင်သော နေရာတွင်ထားပါ။ ဓာတ်မတည့်မှုဖြစ်ပေါ်ပါကဆက်လ
SACPCVF2 - BSC Vital White Charcoal Mask
"Charcoal နှင့် Bamboo တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော အဆီပြန်ခြင်းနှင့် ချွေးပေါက်ကျယ် ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည့် Vital White Charcoal Mark ဖြစ်သောကြောင့် အရေပြားအတွင်းပိုင်းရှိ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှာပေးပြီး အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပါသည်။ မိမိမျက်နှာ၏ အတွင်းပိုင်းကို သန့်စင်ပေးသည့် Cleansing Cream ကို အသုံးပြုပါ ပြီးနောက် Facial Foam နှင့် သန့်စင်ပေးပြီး ၊ (Vital White Charcoal Mask) ဖြင့် ပေါင်းတင်ပေးနိုင်ပါသည်။ဝက်ခြံသမားများနှင့် Make Up အမြဲလိမ်းသော သူများအတွက် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ အေး၍ခြောက်သွေ့သ
SACPDVF2 - BSC Vital White Vit-C Hydrating Mask Pristine Bright
ပင်လယ်ရေညှိ နှင့် White Tea ဓာတ်တို့ ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရေကို နူးညံ့စိုပြေစေသည့် Vital Whtie Vit-C Deep Hydrating Mask ဖြစ်ပြီး အရေပြားပျက်စီးနိုင်မှု ကာကွယ်ပေးခြင်း ၊ အရေပြား၏ ခံနိုင်ရည်စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ အရေပြားရောင်ရမ်းနာကို ကုသရာတွင် ကူညီပံ့ပိုးပေးခြင်း တို့ဖြင့် အသားအရေကို သဘာဝတိုင်း နူးညံ့စိုပြေစေပါသည်။ မိမိမျက်နှာ၏ အတွင်းပိုင်းကို သန့်စင်ပေးသည့် Cleansing Cream ကို အသုံးပြုပါ ပြီးနောက် Facial Foam နှင့် သန့်စင်ပေးပြီး ၊ (Vital White Vit-C Deep Hydrating Mask ) ဖြင့် ပေါင်
SCXXBVPO - BSC Vital White Double Perfect Skin Set Day & Night
Day Cream သည် မွဲခြောက်နေသော အသားအရေကို တောက်ပစေပြီး ပြီးပြည့်စုံသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် Melanin ကို တားဆီးပေး‌နိုင်သောကြောင့် အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပြီး Double Vitamin C&B3 က လိမ်းပြီးပြီးချင်း အသားအရေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေကာ အစိုဓာတ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။ SPF 20 PA+++ ပါဝင်တာကြောင့် သင့်အသားအရေကို နေရောင်ခြည်နဲ့ လေထုညစ်ညမ်းမှုကနေ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါသည်။ Night cream ၏ 4-step skin treatment သည် အရေပြား၏ အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်စေသေ လုပ်ငန်းစဉ်ကို မြှင့်တင်ပေးသောကြောင့်
BCMNOBF1P8 - BSC Pure Care Absolute Nourishment Emulsion
Absolute Nourishment Emulsion သည် အသားအရည်ကို အာဟာရဖြည့်ပေးပြီး စေးကပ်ခြင်းမရှိပဲ စိမ့်ဝင်မှု မြန်ဆန်သော နို့ရည် ဖြစ်ပါသည်။ Jojoba Oil (Jojoba Oil)၊ ဗီတာမင်အီး (Vitamin E) တို့ ပေါင်းစပ်ပါ၀င်ထားသောကြောင့်အသားအရေကို နူးညံ့စေပြီး အစိုဓာတ်ကိုထိန်းပေးနိုင်သောကြောင့် အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
BCLISBP8 - BSC Pure care Soothing Lotion
Soothing Lotion သည် ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး Aloe Vera (Aloe Vera) နှင့် Oxygen Booster (အောက်ဆီဂျင် Booster) တို့မှ ထုတ်ယူထားသောကြောင့် အသားအရေကို လန်းဆန်းစေပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အသားအရေကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးကာ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်မှုကို နှေးကွေးစေပါသည်။ Soothing Lotion သည် ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းဖြင့် စမ်းသပ်ထားပြီး ထိခိုက်လွယ်သောအသားအရေများအတွက်ပါ အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသားအရေ ယားယံခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ အသုံးပြုပုံ- မျက်နှာကို ရေဆေးချပြီး
BCLIOBP8 - BSC Pure Care Toning lotion
Toning Lotion သည် ချွေးပေါက်အတွင်းရှိ အကြွင်းအကျန်များကို ဖယ်ရှားပေးပြီး ချွေးပေါက်များကို ကျဉ်းစေပါသည်။ Witch Hazel (Witch Hazel) နှင့် Oxygen Booster (အောက်ဆီဂျင် Booster) တို့ ပေါင်းစပ် ပါ၀င်ထားသည့်အတွက် အစိုဓာတ်ကို ဖြည့်တင်းပေးပြီး နူးညံ့ချောမွေ့စေကာ ဝက်ခြံကြောင့် ယားယံခြင်းကို သက်သာစေပြီး ရောင်ရမ်းမှုကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ ဝက်ခြံပြဿနာများ၊ အဆီပြန်သော အသားအရေများအတွက် အထူးထုတ်လုပ်ထားပါသည်။ ဥရောပစံချိန်စံညွှန်းအရ စမ်းသပ်ထားပြီး Alcohol နှင့် မွှေးရနံ့ ကင်းစင်သော Toning Lotion ဖြစ်ပါသည်။ အသုံးပ
BCCNPBFP8 - BSC Pure Care Absoute Nouristment Cream
Algisium C, Sodium Hyaluronate, Vitamin E + light cream စသည့် အာဟာရဓာတ်များစွာပါ၀င်ပြီး အစိုဓာတ်ကို အပြည့်အဝဖြည့်တင်းပေးသည့်အတွက် အသားအရေကို ခြောက်သွေ့ခြင်း ကင်းစေသည့် မျက်နှာလိမ်းခရင်မ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အရေပြားအတွင်းသို့ လျင်မြန်စွာ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး စေးကပ်ခြင်းမရှိသောကြောင့် မျက်နှာပေါ်တွင်အဆီပြန်ခြင်းမရှိပဲ အစိုဓာတ်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ကာ အရေးအကြောင်းများဖြစ်ခြင်းမှ နက်ရှိုင်းစွာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ sensitive skin, dry-combination skin များနှင့် အထူး သင့်လျော်ပါသည်။
SEL1AZF - BSC Valentina Musk Oil
BSC Nook Musk Oil သည် ပန်းပွင့်များနှင့် လိမ္မော် တို့မှ ပေါင်းခံထားသော YLANG YLANG၊ ROSE၊ NEROLI၊ VANILLA နှင့် WHITE MUSK တို့ အဓိက ပေါင်းစပ် ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် ဆွဲဆောင်မှုရှိသော ရနံ့ဆီ ပို့ဆောင်ပေးမည့် Roll on ပါသည့် ရေမွှေးအဆီဖြစ်ပါသည်။ ကျက်သရေရှိသော မိန်းမပျိုကဲ့သို့ တမူထူးခြားသော နူးညံ့သော ရနံ့ကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေကာ တနေ့တာလုံးလန်းဆန်းတက်ကြွစေပြီး ကြာရှည်ခံသည့်ရေမွေးအဆီဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အသုံးပြုနိုင်သော ရေမွှေးဆီဖြစ်သည့်အတွက် အနည်းငယ်စွတ်ရုံဖြင့် တနေ့တာလုံး သင်းရနံ့ ရရှိစ
SCLNRGM2 - BSC Rose Petal Serum
BSC ROSE PETAL WHITE SERUM သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Rose Water နှင့် Nano CeraVit C တို့၏အာဟာရဓာတ်များကို ပေါင်းစပ်ထားသည့်အတွက် အသားအရေကို ကြည်လင်စေပြီး ကျန်းမာစေကာ တောက်ပသောအသားအရေကို ပေါ်လွင်စေပါသည်။ ထို့အပြင် အသားအရေကို ညီညာစေပြီး အမည်းစက်များကို ပျောက်ကင်းစေပါသည်။ Damask Rose မှ သန့်စင်ထားသော ဂျယ်လီပုံစံရှိသော Rose Petal Capsule သည် အသားအရေကို နူးညံ့စေပြီး ရေဓာတ်ပြည့်ဝစေကာ ငယ်ရွယ်နုပျိုသော အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။
SCXXGKPO - BSC Age Bloc Double Perfect Skin Set
BSC AGE BLOC BOOST HYDRATING CREAM SPF20 PA+++ သည် Sun Triple Filter ဖြင့် အသားအရေကို အပူဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးသည့် နေ့လိမ်းခရင်မ်ဖြစ်သောကြောင့် UVA၊ UVB နှင့် IR ရောင်ခြည်များမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ထို့အပြင် အသားအရေကို အာဟာရဓာတ်အသစ်များ ရရှိစေရန် ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသောကြောင့် အရေးအကြောင်းများကို သက်သာစေပြီး အသားအရေကို ချောမွေ့စေပါသည်။ Black Currant Extract သည် ဗီတာမင် C နှင့် ဗီတာမင် E တို့ပါ၀င်သောကြောင့် နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးသွားသော အသားအရေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေကာ အသားအရေကို ကြည်လင်ဝင်းပစေပါသည်။
SCCNPUM1 - BSC Crystal Aura Sunscreen SPF 50 PA+++ Anti-Pollution
အသားအရေကို ပျက်စီးစေနိုင်သော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် A,B ကို အစွမ်းကုန် ကာကွယ်ပေးပြီး ဗီတာမင် C နှင့် E ပါသောကြောင့် အသားအရေကို ကျန်းမာကြံ့ခိုင်စေပါသည်။ ထိရောက်မှုမြင့်မာ‌စေရန် နည်းပညာအသစ်ကို အသုံးပြုထားသော နေလောင်ဒဏ်ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် အသားအရေ ညစ်ညမ်းမှုနှင့် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း လက္ခဏာများ ကို ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါသည်။ UVA ရောင်ခြည်များမှ SPF 50 နှင့် UVA +++ ပါဝင်သောကြောင့် အသားအရည်ကို ထိရောက်စွာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။ နေရောင်ကာ ခရင်မ် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် အစိုဓာတ်ထိန်းပေးပြီး အသားအရေတိုင်းအတွက် သင့်လျ
SCCNDX - BSC Aqua Sunscreen SPF 50 PA++++
BSC Aqua Sunscreen SPF50 PA++++ သည် ရေဓာတ်ကို အခြေခံပြီး ပေါ့ပါးသော texture ရှိသည့် နေရောင်ကာကွယ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင် UVA နှင့် UVB ရောင်ခြည်များကို အထူးကာကွယ်ပေးနိုင်သည့်အပြင် Seaweed Extract (Corallina Officinalis) ပါ၀င်သောကြောင့် အသားအရေကို IR ရောင်ခြည်ဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးသည့် ဂုဏ်သတ္တိရှိပြီး Aqua Ceria သည် အရေပြားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများမှ ထွက်လာသော အပြာရောင်အလင်းတန်းများကို ကာကွယ်ပေးသည်။ DNA Guardian နှင့် Ectoin တို့ ပေါင်းစပ်ပါ၀င်ထားသောကြောင့် အသားအရေကို ရေဓာတ်ခမ်းခြောက
SDCDER - BSC Extra Care Hair Volume Conditioner
Hair volume conditioner သည္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းမွု ့ကိုအားျဖည့္ေပးေသာclitoria Ternatea caffir limeအပါအ၀င္ leaf oil ႏွင့္Organio elpsတို့ကဆံပင္အားသန့္စင္ေပး့္သည္၊ဆံပင္နဲ့ဦးေရျပားကိုစိုစြတ္ေစသည္။သဘာ၀ပဲေစ့၃မ်ဳိးflower extract,citrus Hystrixya Joponica(Loquat)leaf extractသည္နက္ေမွာင္သန္စြမ္းေသာဆံပင္ကိုေပးသည္၊ေျခာက္ေသြ ့ေသာဆံပင္အတြက္သင့္ေတာ္သည္။
SDCORR - BSC Extra Care Hair Fall Control Conditioner
့Hair fall conditioner သည္သဘ၀မွရရွိေသာGinger Kaffirႏွင့္ lime extractတုိ ့သည္ဆံပင္ေျခာက္ေသြ ့ျခင္းကိုကာကြယ္ေပးသည္၊ဆံပင္သားကိုအဆီမစုဘဲေပ်ာ့ေျပာင္ေခ်ာမြတ္ေစရန္အဟာရျဖည့္ေပးသည္၊ပ်က္စီးလြယ္ေသာဆံသားမ်ားကိုက်မ္းမာသန္စြမ္းေစသည္၊အဆီျပန္္ေသာဆံပင္အတြက္သင့္ေတာ္သည္။
BAPKMVP1 - PURE CARE VEGAN SOFT MATTE POWDER SPF 25 PA +++
BAPKMVC1 - PURE CARE VEGAN SOFT MATTE POWDER SPF 25 PA +++
BAPKMVC2 - PURE CARE VEGAN SOFT MATTE POWDER SPF 25 PA +++
BAPKMVC3 - PURE CARE VEGAN SOFT MATTE POWDER SPF 25 PA +++
SCLNTV - PURECARE VEGAN TOTAL SKIN PERFECT SERUM
PKBS. KMA BB Brilliant Cake SPF 25 PA++ #C1 - 10g
ပေါင်ဒါကိတ်လေးမှCollagen ဓါတ်ကိုရရှိ​စေနိုင်​သောNano Collagen ရဲ့အာနိသင်ကြောင့် whitening ,wrinkle, moisturizing, youthful Looking, Peral Powder ပါဝင်​သော​ကြောင့် Crystal လိုကြည်လင်စေတဲ့ မိတ်ကပ် Look ရစေပြီးSPF 25PA++ ပါလို့နေ​ရောင်ခြည်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။Advance Surface Modification Technology ဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားတာကြောင့် အရေးကြောင်းပါးစေ(Blur Skin) Waterproof ဖြစ်လို့ ချွေးစို၊ရေစိုခံစေပါတယ်?C1 (အသားအရောင်အဖြူသမ်း/ ပန်းရောင်ရှိသောသူ)
CHWW 01. KMA Water Resist Liquid Foundation #01-light beige -30ml
Oil-Free formulaဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားပြီးအရေးအကြောင်းများအမည်းစက်များနှင့်အပြစ်အနာအဆာများကိုဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ရုံသာမကအဆီပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတစ်နေတာလုံးလှပနေစေပါသည်။ water resistဖြစ်သောကြောင့်၂၄နာရီတိုင်အောင်မိတ်ကပ်သားမပျက်မကွက်ပဲကြာရှည်ခံလှပစေပြီးအသားအရေကိုချောမွေ့နေစေပါသည်။ SPF30ကြောင့်နေရောင်မှကာကွယ်ပေးခြင်း၊ရေစိုခံခြင်း၊ချွေးပြန်ခြင်း၊ကြာရှည်ခံခြင်းအပြင်ခြောက်သွေ့သောSilicon texture ဖြစ်သည့်အတွက်လိမ်းရလွယ်ကူပြီးအသားအရေကိုချောမွေ့နူးညံ့စေသည်။#01light beige(မျက်နှာအသားအရေဖြူဝင်းသူ)
CHWW 02. KMA Water Resist Liquid Foundation #02-warm beige -30ml
Oil-Free formulaဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားပြီးအရေးအကြောင်းများအမည်းစက်များနှင့်အပြစ်အနာအဆာများကိုဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ရုံသာမကအဆီပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတစ်နေတာလုံးလှပနေစေပါသည်။ water resistဖြစ်သောကြောင့်၂၄နာရီတိုင်အောင်မိတ်ကပ်သားမပျက်မကွက်ပဲကြာရှည်ခံလှပစေပြီးအသားအရေကိုချောမွေ့နေစေပါသည်။ SPF30ကြောင့်နေရောင်မှကာကွယ်ပေးခြင်း၊ရေစိုခံခြင်း၊ချွေးပြန်ခြင်း၊ကြာရှည်ခံခြင်းအပြင်ခြောက်သွေ့သောSilicon texture ဖြစ်သည့်အတွက်လိမ်းရလွယ်ကူပြီးအသားအရေကိုချောမွေ့နူးညံ့စေသည်။#02 warm beige (ညိုချောလေးများအတွက်)
CHWW OF. KMA Water Resist Liquid Foundation #OF-medium beige -30ml
Oil-Free formulaဖြစ်ထုတ်လုပ်ထားပြီးအရေးအကြောင်းများအမည်းစက်များနှင့်အပြစ်အနာအဆာများကိုဖုံးအုပ်ပေးနိုင်ရုံသာမကအဆီပြန်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ပြီးတစ်နေတာလုံးလှပနေစေပါသည်။ water resistဖြစ်သောကြောင့်၂၄နာရီတိုင်အောင်မိတ်ကပ်သားမပျက်မကွက်ပဲကြာရှည်ခံလှပစေပြီးအသားအရေကိုချောမွေ့နေစေပါသည်။ SPF30ကြောင့်နေရောင်မှကာကွယ်ပေးခြင်း၊ရေစိုခံခြင်း၊ချွေးပြန်ခြင်း၊ကြာရှည်ခံခြင်းအပြင်ခြောက်သွေ့သောSilicon texture ဖြစ်သည့်အတွက်လိမ်းရလွယ်ကူပြီးအသားအရေကိုချောမွေ့နူးညံ့စေသည်။#0Fmedium beige(အလယ်အလတ်အသားအရေရှိသူ)
CBRN. KMA Pro Eyebrow Pencil # N2 - Medium Brown - 1g
KMA Pro Eyebrow Pencil 1.2g ရေစိုခံ မျက်ခုံးမွေးခဲတံ အကောင်းစားခရင်မ်သဘာဝအညိုရောင်ဒါမှမျက်ခုံးမွှေးကိုပြောင်မြောက်ပြီးတင်းကျပ်တဲ့ရောင်ခြယ်မော်လီကျူးတွေနဲ့အတိုင်းအတာရှိစေမှာဖြစ်ပြီးရေးရလွယ်ကူပြီးမျက်ခုံးမွှေးကိုသဘာဝအတိုင်းလှပစေမှာပါ။သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသည်။ချောင်းတစ်ချောင်းတွင်ထောင့်ပေါင်းစုံမှလှပသောမျက်ခုံး။ရေစိုခံပြီးချွေးစိုခံသောဖော်မြူလာသည်တစ်နေ့တာလုံးကြာရှည်ခံသည်။
PAPDXY #Y1 - Arty Professional Expertise Translucent Loose Powder (15g)
ဆန်းသစ်တီထွင်ထားသော Polyquat နည်းပညာဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားပြီး ပေါ့ပါးသော Loose Powder အမှုန့်သည်အသားအရေကို matte finish look ဖြင့် တောက်ပစေကာ တနေ့တာလုံး ကြာရှည်ခံစေပါတယ်။ အလွန်နူးညံ့ ပျော့ပျောင်းသော မိတ်ကပ်သားအမှုန့်သည် အသားအရေ အပြစ်အနာအဆာများကို အသေးစိတ် အသုံးပြုနိုင်ပြီး သဘာ၀အတိုင်း ကြည်လင်လာစေ‌ကာ နူးညံ့ချောမွေ့စေပါသည်။ ထို့ပြင် Nano-Technology ဖြင့် အသားအရေကို UVA နှင့် UVB ရောင်ခြည်များမှ ကာကွယ်ပေးပြီး တစ်နေ့တာလုံး ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။အသုံးပြုပုံ- အမှုန့်ကို ဘရက်ရှ် သို့မဟုတ် ရေမြှုပ်ကိုသု
PBRGGYF #L0 - Arty professional Glow Lip Balm (3.5g)
သဘာဝအတိုင်း ပန်းရောင်သန်းစေသော အစွမ်းကို ပေးစွမ်းနိုင်သည့်အပြင် ချောမွေ့ နူးညံ့ပြီး ပေါ့ပါးသော အသွင်အပြင်ကို ရရှိစေပါသည်။ ၎င်းတွင်Phytosteryl/Octyldodecyl Lauroyl Glutamate ဖြင့် နှုတ်ခမ်းကို အစိုဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း၊ Punica Granatum Friut Extract နှင့် Plamitoyl Oilgopeptide သည် နှုတ်ခမ်းသားကို ဖြူစင်တောက်ပစေပြီး သဘာဝအတိုင်း ကျန်းမာစေပါသည်။ ထို့ကြောင့် နှုတ်ခမ်းသားကွဲအက်ခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ မဲခြင်း ကင်းစေပြီး ပန်းရောင်သန်းသော နှုတ်ခမ်းသားများကို ရရှိပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။အသုံးပြုပုံ- နှုတ်ခမ်းကို လ